Mary Sharpe, Madaxa Sare ee Fulinta - Hay'adda Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Mary Sharpe, Madaxa Sare ee Sare
Mary Sharpe waxay ku dhalatay Glasgow waxaana ku koray qoys si loogu adeego adeega dadweynaha iyada oo loo marayo baridda, sharciga iyo daawada. Laga soo bilaabo da 'yar, waxay la yaabtay awoodda maskaxda waxayna baratay tan iyo tan tan iyo markaas.
Waxbarashada iyo Khibradda Xirfadaha
Mary waxay ku qaadatay shahaadada Master of Arts ee Jaamacadda Glasgow faransiis iyo Jarmal iyadoo baratay cilmu-nafsiga iyo falsafada akhlaaqda. Waxay ku raacday tan iyada oo haysata shahaadada Bachelor-ka ee sharciga. Markii ay qalin jabisay ka dib waxay ku shaqeysay qareen iyo u dooda 13ka sano ee soo socda Scotland iyo 5 sano oo ay ka shaqeyneysay Guddiga Yurub ee Brussels. Kadib waxay qaadatay shaqadii qalin jabinta ee jaamacada Cambridge waxayna macallin halkaa ka noqotay 10 sano. Sannadkii 2012 Mary waxay ku noqotay Kulliyadda U-doodayaasha, Scottish Bar, si ay u cusboonaysiiso shaqadeeda maxkamadda. 2014 waxay ku dhaqaaqday tababar la'aan si ay u dhisto Hay'adda Abaalmarinta Abaalmarinta. Waxay wali xubin ka tahay Kulliyadda Caddaaladda iyo Kulliyadda U doodayaasha.
Maryan waxay soo martay dhowr door oo hoggaamineed Hay'adda 'Reward Foundation'. Bishii Juun 2014 waxay ahayd Guddoomiyaha aasaaska. Bishii Meey 2016 waxay u gudubtay doorka xirfadeed ee Sarkaalka Sare ee Fulinta oo ay markaa haysay illaa Nofeembar 2019 markii ay dib ugu soo biirtay Guddiga iyada oo ah Guddoomiyaha. Markii ugu dambaysay, bishii Maarso 2021 waxay mar kale u dhaqaaqday doorka Sarkaalka Sare ee Fulinta.
Mary waxay kaqeyb gashay jaamacada Cambridge sanadihii 2000-1 si ay usameyso shaqada qalin jabinta ee ku saabsan jaceylka galmada iyo xiriirka awooda lamaanaha muddadii Qadiimiga Qadiimiga ah ilaa iyo xilligii hore. Nidaamyada qiimayaasha iska hor imanaya ee muuqda wakhtigaas muhiimka ah ayaa weli saameyn ku leh adduunka maanta gaar ahaan xagga diinta iyo dhaqanka.
Mary waxay ku sii jirtey Cambridge tobanka sano ee soo socda.
Joojinta Waxqabadka Peak
Shaqadeeda cilmi-baarista ka sokow, Mary waxay u tababbartay fududeeye aqoon-is-weydaarsi Jaamacadda ah laba hay'adood oo caalami ah, abaalmarino ku guuleystay abaalmarin iyadoo la adeegsanayo cilmi-baaris ka socota cilmu-nafsiga iyo neerfaha habka loo adeegsado. Diiraddu waxay ahayd horumarinta adkeysiga culeyska fekerka, xiriirinta dadka kale iyo noqoshada hoggaamiyeyaal wax ku ool ah. Waxay sidoo kale u shaqeysay sidii lataliye ardayda ganacsatada ah iyo qoraa saynis Machadka Cambridge-MIT. Tani waa isku-dhaf u dhaxeeya Machadka Isku-xidhnaanta ee Massachusetts (MIT) iyo Jaamacadda Cambridge.
Xirfadeeda Jaamacadda Cambridge waxay sii ahaaneysaa labadaba Kuleejka St Edmund iyo Kuliyadda Lucy Cavendish halkaas oo ay xubin ka tahay Associate.
Mary waxay sanad ku qaadatay Booqashada Aqoonyahanada St Edmund's College, University of Cambridge sanadki 2015-16. Tani waxay u oggolaatay iyada inay ku sii socoto xawaaraha baaritaanka sayniska soo baxaya ee qabatinka akhlaaqda. Mudadaas waxay kahadashay dhowr iyo toban shirar qaran iyo kuwa caalami ah. Mary waxay daabacday maqaal ku saabsan "Istaraatijiyadaha looga Hortagayo Balwadda Internetka ee Maandooriyaha" halkan (bogagga 105-116). Waxa kale oo ay wadaagaan cutubka La Shaqeynta Dembiilayaasha Galmada - Tilmaamaha Dhaqtarka waxaa daabacay Routledge.
Laga soo bilaabo Janaayo 2020 illaa markii ugu horeysay ee la xannibay aafada, Mary waxay joogtay Lucy Cavendish College iyada oo ahayd Aqoonyahan Booqasho ah. Muddadaa waxay daabacday a warqad oo ay la socdaan Dr Darryl Mead halka ay mustaqbalka tahay in la aado cilmi baarista mustaqbalka ee isticmaalka qaawan ee dhibaatada leh.
Maryan waxay sii wadaa shaqada ku saabsan qabatinka dabeecada sida xubin ka mid ah Bulshada Caalamiga ah ee Daraasada Xanuunka Dhaqanka. Waxay ku soo bandhigtay warqad shirweynahoodii 6-aad ee Caalamiga ah ee ka dhacaya Yokohama, Japan bishii Juun 2019. Waxay daabacdaa cilmi meeshan soo socota ee asxaabtani waxay dib u eegtay joornaalada. Warqadda ugu dambeysa ayaa laga heli karaa halkan.
Bandhigga Teknolojiyada iyo Qorsheynta (TED)
Fikradda TED waxay ku saleysan tahay "fikradaha mudan in la wadaago". Waa barnaamij madadaalo iyo madadaalo oo loo heli karo wadahadalo toos ah iyo khadka tooska ah. Maryan waxay tagtay TED Global oo ku taal Edinburgh sanadkii 2011. Muddo yar ka dib ayaa la weydiistay inay abaabulaan tii ugu horreysay TEDx Dhacdadii Glasgow ee 2012. Mid ka mid ah dadkii hadla ee ka soo qayb galay ayaa ahaa Gary Wilson kaas oo la wadaagay natiijooyinkii ugu dambeeyay ee laga helay caankiisa website yourbrainonporn.com oo ku saabsan saameynta sawir-gacmeedka qaawan ee internetka ee maskaxda ku jira hadal la yiraahdo "Tijaabinta Porn Porn". Wixii markaas ka dambeeyay hadalkaas waxaa loo daawaday in kabadan 13.6 milyan jeer waxaana loo tarjumay luqadaha 18.
Gary Wilson wuxuu ballaadhiyay wadahadalkiisii ​​caanka ahaa ee buug aad u fiican, oo hadda la daabacay daabacaddiisa labaad Maskaxdaada on Porn: Farshaxanka Internetka iyo Sii-saarka Soogalootiga. Dhamaan shaqadiisa, kumanaan qof waxay ku sheegeen websaydhka ka soo kabashada qaawan ee macluumaadka Gary ay ku dhiirrigeliyeen inay ku tijaabiyaan joojinta lebbiska. Waxay soo sheegeen in caafimaadkooda galmada iyo dhibaatooyinka shucuurtu ay bilaabeen inay yaraadaan ama baaba'aan tan iyo markii ay joojiyeen porno. Si looga caawiyo faafinta ereyga ku saabsan horumarkan caafimaadka bulshada ee xiisaha iyo qiimaha badan, Mary waxay la aasaastay The Reward Foundation Dr Darryl Mead 23-kii Juun 2014.
Isticmaalka suufku waa arrin u gaar ah doorashada dadka waaweyn. Uma jeedno inaan mamnuuco laakiin waxaan aaminsanahay inay tahay waxqabad sare oo khatar ah xitaa kuwa ka weyn 18 sano. Waxaan rabnaa inaan ka caawinno dadka inay sameeyaan 'xog ogaal' ku saabsan taas oo ku saleysan caddeynta baaritaanka hadda la hayo. Waxaan aaminsanahay inay kafiican tahay caafimaadka iyo samaqabka in waqti lagu bixiyo horumarinta xirfadaha bulshada ee lagama maarmaanka u ah in xiriirka dhow lala shaqeeyo muddada fog.
Hay'adda 'Reward Foundation' waxay ololeysaa sidii loo yareyn lahaa carruurta sida sahlan ay ugu heli karaan qaawan ee internetka maxaa yeelay daraasiin cilmi waraaqaha ayaa tilmaamaya inay waxyeello u geysaneyso carruurta heerka ay ugu nugul yihiin horumarinta maskaxda. Carruurta otisam otomatik oo leh baahiyo waxbarasho oo gaar ah ayaa si gaar ah ugu nugul waxyeelada. Waxaa kor u kac weyn ku yimid xadgudubka jinsiga ee cunuga-ku-jira ee sannadkii hore 7, dhaawacyada jinsiga ku salaysan ee jinsiga ah iyada oo loo eegayo xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka kuwaas oo ka soo qayb galay aqoon isweydaarsiyo iyo suurtagal ahaan xitaa dhimashada. Waxaan taageersanahay waxqabadyada Dowlada UK hareeraha xaqiijinta da'da adeegsadayaasha maaddaama ay tahay tallaabada ugu horreysa uguna muhiimsan ee ilaalinta carruurta. Maaddaama meel loo saaray Sharciga Dhaqaalaha Dijital ah Qeybta III, waxaan rajeyneynaa in dowladdu ay dardargelin doonto ka shaqeynta Sharciga Waxyeellada Onlineka. Tani ma aha xabad qalin ah, laakiin waa meel fiican oo laga bilaabo. Kama badali doonto baahida waxbarasho ee loo qabo halista.
Abaalmarinta iyo Ka Qeybgalka
Guddoomiyaheena ayaa helay abaalmarino badan tan iyo 2014 si loo horumariyo shaqada Aasaasiga. Waxay ku bilaabatay sanad tababar ah iyada oo la gudoonsiiyay Abaalmarinta Inubvation Incubator Bulshadeed ee Scottish-ka ah. Tan waxaa la geeyay at Pot The MILMA gudaha Edinburgh. Waxaa ku xigay laba abaalmarino bilow ah oo ka socda UnLtd, laba ka socota Hay'ada Waxbarshada iyo midkale oo ka socota Sanduuqa Bakhtiyaa-nasiibka weyn. Maryan waxay lacagta u isticmaashay abaalmarintan si ay ugu dhiiri galiso nidaamka dijitaalka ah ee dijitaalka ah. Waxay kaloo sameysay qorshayaal casharro ah oo kusaabsan qaawan oo loogu talagalay barayaasha si ay ugu adeegsadaan iskuulada. 2017 waxay gacan ka gaysatey horumarinta aqoon-isweydaarsiga hal maalin ah oo ay qireen kuliyadaha Royal ee Dhakhaatiirta Guud. Waxay tababartaa xirfadleyda wax ku saabsan saameynta qaawan ee internet-ka ee caafimaadka maskaxda iyo jirkaba.
Maryan waxay ka mid ahayd Guddiga Agaasimayaasha Bulshada ee Horumarinta Caafimaadka Galmada ee USA laga bilaabo 2016-19 waxayna soo saartay aqoon isweydaarsiyo aqoonsi ah oo loogu talagalay daaweeyayaasha jinsiga iyo barayaasha jinsiga ee ku saabsan dhibaatada dhibaatada leh ee isticmaalka qaawan ee internetka ee dhalinyarada. Waxay ku biirisay warqad Ururka Qaranka ee Daaweynta Dadka Xadgudba ee "Kahortaga Dhaqanka Galmada Waxyeelada Leh" waxayna sidoo kale 3 aqoon isweydaarsi u siisay dhaqaatiirta ku saabsan saameynta filimada qaawan ee internetka ee ku saabsan dhaqanka galmada ee waxyeelada leh.
Laga soo bilaabo 2017-19 Mary waxay xiriir la lahayd Xarunta Dhallinyarada iyo Caddaaladda Dambiyada ee Jaamacadda Strathclyde. Waxqabadkeedii ugu horreeyay waxay ka hadlaysay dhacdadii CYCJ markay ahayd 7 Maarso 2018 magaalada Glasgow. Unugyada sayniska iyo unugyada xabsiyada: La kulma baahida xididada iyo garashada ee dhalinyarada nugul.
2018 waxaa loo magacaabay mid ka mid ah WISE100 hoggaamiyayaasha haweenka ee shirkadaha bulshada.
Markaan shaqeynin, Mary waxay ku raaxeysataa orodka, yoga, qoob ka ciyaarka iyo la wadaagida fikradaha cusub asxaabta.
La xiriir Maryan email ahaan mary@rewardfoundation.org.